आगन बहुउद्देश्यीय सहकारीको अध्यक्षमा भट्टराई, सचिवमा विश्वकर्मा – KhabarKhurak
पाल्पा, २० असार । आगन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड तानसेन पाल्पाको प्रारम्भिक साधारण सभा शनिबार तानसेनमा सम्पन्न भएको छ ।
सभाले भीमलाल भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ सहकारी सञ्चालक समिति चयन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा गोपालप्रसाद बश्याल, सचिवमा मिलन विश्वकर्मा, सहसचिवमा लक्ष्मी पाण्डे, कोषाध्यक्षमा अम्बिका पाण्डे रहेका छन् । सदस्यहरूमा रामप्रसाद भट्टराई, रामप्रसाद खनाल, कमला सारू, अञ्जु भण्डारी, सकुन शाक्य र श्रीप्रकाश ढुंगाना चयन भएको निर्वाचन उपसमितिका संयोजक घनश्याम भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिका नयाँ पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।
यसैगरी भेलाले भबिन्द्र गौतम संयोजक रहेको तीन सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति चयन गरेको छ । सदस्यहरूमा बालकृष्ण बश्याल र मञ्जु रेग्मी रहेका छन।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले सहकारीले जनमैत्री अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा केही वित्तीय संस्थाले विपन्न परिवारको उठिबास बनाएको उनले बताउनुभयो । केही लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीले धेरै विपन्न परिवारको उठिबास बनाएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘उठिबास होइन, घरबास बसाउने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतीमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’ संकटका बेला मात्र नभई सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकलाई सहकारीले सहयोगी भूमिका निभाउनु पर्नेमा प्रमुख शाहीले जोड दिनुभयो ।
निर्वाच उपसमितिका संयोजक घनश्याम भट्टराइले सहकारी विपन्न परिवारको सारथी बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कुमारी बैंक पाल्पा शाखा प्रमुख अम्बिकाप्रसाद बश्यालले पारदर्शी र जवाफदेही भएर संस्था सञ्चालन गर्न सुझाउनुभयो । वयोवृद्ध टीकाराम बश्यालले एकताको भाव लिएर सहकारीमार्फत जनताको दुख सुखमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
१२५ जना शेयर सदस्य रहेको यस सहकारीमा ३१ लाख बढी शेयर पूँजी रहेको छ। सभाले संस्था सञ्चालनका लागि विभिन्न नीति निर्देशिका सहित अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
गएको पुस महिनामा तानसेन नगरपालिकामा दर्ता भएर सहकारीले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहकारीले सुपथ पसल सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तीरय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष भीमलाल भट्टराइले बताउनुभयो ।
बुटवलमा समेत समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण देखियोः स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण पुष्टि
इण्डो-नेपाल सामाजिक मञ्च परिवार द्वारा स.प्र.ना.उ. शाहीलाई सम्मानपूर्वक विदाई
राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल द्वारा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरिक्षक शाहीको सम्मानपूर्ण बिदाई
उपत्यकामा ६२ सहित ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४९९ डिस्चार्ज
आज थप भएका २९३ जना संक्रमित मध्ये कुन जिल्लाका कति?
दुवै पदबाट केपी ओलीलाई हटाउनु पार्टी एकताको म्याण्डेटविपरीतः नेकपा नेता रायमाझी
सवा करोडको चेकसहित विद्युतका उपप्रबन्धक गुप्ता प्रकाउ Saturday, August 8, 2020